I-china iAluminium ingxubevange yebhokisi yezixhobo kunye nabathengisi | YSXF
Ibhokisi yethu yoLwimi lweMaxxHaul yenzelwe ukunyusa iinqwelwana ezinesakhelo soLwimi lwe-A ukubonelela ngokugcina izixhobo zakho, izixhobo zokukhempisha, imixokelelwano yokhuseleko, imitya, izigqubuthelo zemoto, izixhobo zangaphandle, iintambo, izinto zokubopha, iintambo, iivili kunye neetekisi ezininzi . Ungaze usilibale isixhobo okanye izixhobo xa uzifuna!
-Yenziwe ngokuqinileyo kunye nokuqina okunganyangekiyo kwezinto ezinobunzima be-aluminium kunye nokwakhiwa komthungo ngokupheleleyo
-Ipateni yedayimani yeplate inika amandla ongezelelweyo kunye noncedo lokugcina imilo yokomelela okomeleleyo
- Faka amanqaku erhasi ukunceda ekuvuleni isiciko, ubambe isiciko endaweni kunye nokuvala okuthambileyo.
- Ibhokisi ilinganisa i-29 "ubude x 18" ubude no-17 "ububanzi nge-15" ngaphambili ngaphambili.
Isitshixo sokutshixa ngamaqhosha ama-2 kunye nendawo ebekiweyo ebambekayo. Iihenjisi ezixhaswayo zifakiwe ukuze isiciko sikwazi ukuvulwa ngokupheleleyo nokuba sibekwe ngqo ngokuchasene netreyila
● Ibhokisi yezixhobo zealuminium eziqinisa amandla amakhulu
Umgangatho ophezulu kunye nokubonakala okuhlala ixesha elide, ukugcinwa okuncinci
Izinto ze-aluminium ezingasindi kakhulu zinciphisa ukutyeba kobunzima kwiitrektara, iinqwelwana ezirhuqwayo okanye iilori.
● Tywina uyilo lomsesane
Inokukhusela ucoceko lwangaphakathi kunye nokuthintela ukungena kwemvula kunye nezinye izinto ezingaphandle.
● Ingenziwa ngobukhulu obahlukeneyo, imibala kunye nezitayile
Ukucoceka nokuqaqamba kwealuminium umbala, nabuphi na ubungakanani bunokwenziwa, kunye nonyango lomphezulu, olwenziwe ngemibala eyahlukeneyo enje ngombala omnyama, ongwevu, isilivere kunye nomhlophe.
Inokwenziwa kwiimilo ezahlukeneyo ngokweemfuno zokuhlangabezana nezinye iimfuno ezahlukeneyo.
Egqithileyo Turck Ibhokisi yezixhobo
Okulandelayo: Ukuthathwa kwebhokisi yezixhobo
I-LIGHTWEIGHT YOKUTHUTHA KULULA NOKUTHWALA-Le bhokisi yezixhobo yenzelwe ngolwakhiwo olomeleleyo kodwa olunobunzima bokukhwela ngaphambili kwetreyila yesitayile se-A. Kulula ukudibana, ilungele ukuphatha ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ukuba kukho imfuneko. Isisombululo esihle sokugcina izixhobo zakho okanye izinto kwigaraji yakho kwaye wongeza indawo yokugcina kwindawo erhuqwayo. DI IDAYIMONDI EQINISEKILEYO YENZEKILE- Yenziwe ngealuminium erhabaxa enamacala adityaniswe nge welding, ukuze isetyenziswe gwenxa. Isixhobo sokugcina ...